 Ma mgbe ndị Farisii nụrụ na Jisọs emeela ka ndị Sadusii mechie ọnụ ha, ha zukọtara ichepụta ajụjụ ọzọ ha ga-ajụ ya. Otu onye nꞌime ha bụ onye ozizi iwu bịara jụọ Jisọs ajụjụ iji nwaa ya sị, “Onye ozizi, olee iwu kachasị mkpa nꞌime iwu nile Mosisi nyere anyị?” Jisọs zara sị ya, “Ọ bụ iwu nke na-asị, ‘Hụ Onyenwe gị bụ Chineke gị nꞌanya site nꞌobi gị nile na site na mkpụrụ obi gị nile, na site nꞌụche gị nile.’ Nke a bụ iwu nke mbụ, bụrụkwa iwu kachasị iwu nile. Iwu ọzọ na-eso nke a nꞌịdị mkpa bụ nke a, ‘Hụ onye agbata obi gị nꞌanya dị ka i si hụ onwe gị nꞌanya.’ Iwu ndị ọzọ nile na ihe nile ndị amụma chọrọ ka unu mee dabeere nꞌebe iwu abụọ ndị a dị.”
 Otu nwoke bịakwutere Jisọs jụọ ya ajụjụ sị, “Ezi onye ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m keta ndụ ebighị ebi?” Jisọs zara sị ya, “Gịnị mere i ji na-ajụ m ajụjụ banyere ihe ziri ezi? Ọ bụ nanị Chineke bụ ezi onye. Ọ bụrụ na ị chọrọ iketa alaeze eluigwe gaa debe iwu nile Chineke nyere.” Nwoke ahụ jụrụ ya ajụjụ sị, “Olee iwu ndị m ga-edebe?” Jisọs zara sị ya, “Egbula mmadụ, akwala iko, ezula ohi, ekwula okwu ụgha. Sọpụrụ nna gị na nne gị. Hụ onye agbata obi gị nꞌanya dị ka onwe gị.”
 Kpachapụnụ anya! Nꞌihi na ndị mmadụ pụrụ ijide unu kpọrọ unu gaa nꞌụlọ ikpe, ma tiekwa unu ihe nꞌụlọ ekpere ha. A ga-ekpe unu ikpe nꞌihu ndị na-achị achị na nꞌihu ndị eze nꞌihi m. Ma nke a ga-enye unu ohere ịgwa ha ihe banyere m. Ee, nke a ga-enyere unu ohere ịgba ama banyere m nye ndị ụwa. “Mgbe ha jidere unu na-ekpe unu ikpe, unu echegbula onwe unu banyere ihe unu ga-ekwu. A ga-eme ka unu mata ihe unu ga-ekwu nꞌoge ahụ. Nꞌihi na ọ bụghị unu ga-ekwu nꞌonwe unu. Kama Mmụọ nke Nna unu bi nꞌigwe ga-esite nꞌọnụ unu kwuo okwu. “Nwanne ga-agbagide nwanne ya ama, mee ka ọ nwụọ. Ndị bụ nna ga-ararakwa ụmụ ha nye. Ụmụ ga-ebili imegide ndị mụrụ ha, mee ka ha nwụọ. Ụmụ mmadụ ga-akpọ unu asị nꞌihi na unu bụ ndị nke m. Ma ndị nile ga-anọgide nꞌokwukwe ha ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta.
 Kwụọnụ ụgwọ nile unu ji. Ka ụgwọ unu ga-ejide ndị mmadụ bụrụ ụgwọ ịhụ ha nꞌanya. Nꞌihi na mgbe ị na-ahụ ndị mmadụ nꞌanya, ị na-emezu ihe nile iwu Chineke chọrọ. Nꞌihi na ọ bụrụ na ị hụ onye agbata obi gị nꞌanya dị ka i si hụ onwe gị nꞌanya, ị gaghị achọ igbu ya, i gaghị ezuru ihe o nwere, ị gaghị enwe anya ukwu nꞌebe ihe o nwere dị, ị gakwaghị eduru nwụnye ya ka gị na ya dinakọọ. Nꞌezie, ị pụrụ imezu ihe iwu nile kwuru ma ọ bụrụ na ị hụ onye agbata obi gị nꞌanya dị ka ị hụrụ onwe gị. O nweghị onye na-echere onye ọ hụrụ nꞌanya echiche ọjọọ. Ọ bụ nke a mere ịhụnanya ji bụrụ idebezu iwu nile. Ihe ọzọ mere o ji dị mkpa ibi ezi ndụ bụ nke a. Unu maara na oge ahụ anyị na-ele anya ya na-abịa nso. Ya mere, sitenụ nꞌụra bilie! Ọbịbịa Onyenwe anyị dị nso. Nꞌezie ọ dị nso karịa mgbe ahụ anyị kweere na mbụ. Abalị ekeela abụọ, ọ fọdụrụ ntakịrị ugbu a, ọ bụrụ ụtụtụ, mgbe Kraịst ga-alọghachi. Ya mere, wezuganụ ọrụ ọjọọ nile nke ọchịchịrị, yikwasịkwanụ onwe unu ihe agha nke ezi ndụ, ụdị nke ndị bi nꞌihè kwesịrị iyiri. Bụrụnụ ndị dị ọcha, na ndị na-ekwu eziokwu nꞌihe nile, ma ọ bụ nꞌehihie ma ọ bụkwanụ nꞌabalị. Unu atụfula oge unu ịkpọ oke oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ ịkwa iko. Ndụ rere ure, esemokwu, ịlụ ọgụ na ekworo, bụ ihe unu na-ekwesịghị ịtụfu oge unu nꞌime ha. Kama yikwasịnụ Onyenwe anyị Jisọs Kraịst ka o nyere unu aka ibi ezi ndụ. Ka ihe unu na-eche nꞌobị unu hapụ ịbụ otu unu ga-esi na-eme ihe ọjọọ nke na-agụ anụ ahụ mmehie unu.
 Otu nꞌime ndị ozizi iwu bịara nꞌebe ahụ nꞌoge ha na-ekwu okwu ahụ, guzo gee ntị nꞌihe ha na-ekwu. Mgbe ọ hụrụ na Jisọs nyere ndị Sadusii ahụ ezi ọsịsa, ọ jụrụ Jisọs ajụjụ sị, “Nꞌime iwu nile olee nke kachasị mkpa?” Jisọs zara sị ya, “Ọ bụ iwu ahụ kwuru sị, ‘Geenụ ntị ndị Izirel! Onyenwe anyị bụ nanị otu Chineke. Unu kwesịrị iji obi unu nile na mkpụrụ obi unu nile, na echiche obi unu nile, na ike unu nile hụ Onyenwe anyị bụ Chineke anyị nꞌanya.’ “Iwu ṅke abụọ, nke dịkwa mkpa, bụ nke sị, ‘Hụ onye agbata obi gị nꞌanya dị ka onwe gị.’ Iwu ọ bụla ọzọ adịghị nke karịrị ndị a mkpa.” Nwoke ahụ zara sị, “Ị zara nke ọma mgbe i kwuru na Chineke bụ nanị otu, na e nweghị chi ọzọ di karịa ya. Ị zakwara nke ọma mgbe ị zara na ịhụ ya nꞌanya dị mkpa karịa aja nsure ọkụ na onyinye ọchụchụ aja nile.” Mgbe Jisọs hụrụ na nwoke a ghọtara ihe ndị a nke ọma, ọ gwara ya sị, “Ị nọ alaeze Chineke nso.” Mgbe nke a gasịrị, ọ dịkwaghị onye ọ bụla ọzọ nwere obi ike ịjụ ya ajụụ ọzọ.
 Nke a bụkwa iwu m na-enye unu: hụrịtaanụ onwe unu nꞌanya dị ka m siri hụ unu nꞌanya. Ịhụnanya kachasị ibe ya ukwuu bụ na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya nꞌihi ndị enyi ya. Unu onwe unu bụkwa ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu edebe ihe nile m nyere unu nꞌiwu. Malite ugbu a, agaghị m akpọkwa unu ndị ohu ọzọ. Nꞌihi na ohu adịghị amazu ihe nile onyenwe ya na-achọ ime. Ma ana m akpọ unu ndị enyi m nꞌihi na ihe nile Nna m naezube ka m gwara unu. “Ọ bụkwaghị unu onwe unu họpụtara m. Ọ bụ m họpụtara unu ka unu baa nꞌime ụwa mịa mkpụrụ, mkpụrụ nke ga-adịgide. Ya mere, ọ bụrụ na unu arịọọ Nna m ihe ọ bụla site nꞌaha m, Nna m ga-enye unu ihe nile unu rịọrọ. Ma nke a bụ iwu m nyere unu. Hụnụ onwe unu nꞌanya.